C02 USB C Jack samandla
IiPorts ezininzi ze-USB-C HUB
Izibuko elinye le-USB-C hub
Ukuncoma okucacisiweyo kwe-USB4 kunye nokwakha phezu kweenkcukacha ezikhoyo ze-USB 3.2 kunye ne-USB 2.0. Uyilo loyilo lwe-USB4 luchaza indlela yokwabelana ngekhonkco elinye elinesantya esiphezulu kunye neendidi zezixhobo zokuphela eziguqukayo ezisebenza ngokufanelekileyo ngokudluliswa komhla ngu-tyye kunye nokusetyenziswa. Njenge-USB Type-C ...
Uqhagamshelwano lwetshiphu emsebenzi Bonisa Port
I-HDMI yenzelwe ukubuyisela isiginali endala ye-analog audio kunye nevidiyo yokuhambisa indawo ezinje ngeSCART okanye iiterminal zeRCA. Ixhasa iifomathi zeTV kunye nekhompyuter zevidiyo, kubandakanya i-SDTV, ividiyo ye-HDTV, kunye neaudiyo zedijithali ezininzi. Zombini i-HDMI kunye ne-UDI ngaphandle komsebenzi wokuhambisa isandi njengelifa ...
Ngaba i-HDMI ibhetele kune-VFA, ukuba kunjalo, siyintoni isizathu?
I-VGA isondela kwiminyaka engama-35 ngoku kwaye iyifomathi ye-analog. Kwikhompyuter yanamhlanje oku kuthetha ukuba kuya kufuneka uguquke ukusuka kumqondiso wedijithali, uye kwi-RGB ye-analogue kunye nokuvumelanisa, emva koko ubuyele kwidijithali ukubonisa kwi-Monitor yakho ye-LED / ye-LCD- kuyakubakho ukulahleka komgangatho womfanekiso kwinqanaba ngalinye, kubandakanya ...
Yintoni i-USB 3.2 esemgangathweni?
I-Universal Serial Bus, okanye i-USB, kudala ikho kwaye siyisebenzisile ukunxibelelana nezixhobo ezahlukeneyo ukusuka kugcino ukuya kwizixhobo zegalelo. Njengoko ixesha lihamba, imigangatho kufuneka ihlaziywe ukuze ihambelane nezixhobo zangoku zentsimbi kunye neemfuno zomsebenzisi wokugqibela. Ukubalula kunye nezobuchwephesha ezahlukeneyo ...
I-USB-C hub kunye ne-USB 3.1 hub Fumana yonke into ofuna ukuyifumana malunga ne-USB-C hubs kunye nee-USB 3.1 hubs apha. Uyintoni umahluko? Ngaba kukho umahluko? Uhlobo lwe-C lwe-USB yifomathi yesinxibelelanisi eyaziswa ngo-2015. Isinxibelelanisi sohlobo-A, esiqhelene ixesha elide, siza kutshintshwa ...
I-USB 3.0 hub Umgangatho we-USB 3.0 owanikwa ngowama-2008 wathembisa ukonyuka okukhulu kwenqanaba lokudlula kwedatha ngokuthelekiswa nobuchwephesha be-USB 2.0. Ngenxa yokuba i-USB 3.0 iyahambelana netekhnoloji yangaphambili, izixhobo ezindala zisakwazi ukusetyenziswa ngehabhu entsha ye-USB 3.0. Isishwankathelo ...
Yintoni i-HDMI ezisa kuthi?
Itekhnoloji ye-HDMI Phantse izixhobo ezizibhiliyoni ezisibhozo ezenzelwe itekhnoloji ye-HDMI ukuba zithunyelwe ukususela oko kwagqitywa ukucaciswa kwe-HDMI ngoDisemba 2002. Ingcaciso yakutshanje ye-HDMI 2.1 ekhutshwe ngo-Novemba ka-2017 iyaqhubeka nokwenza ukuba kuphuhliswe iindidi zemveliso ...
Ukucaciswa kwe-HDMI 2.1 Ukucaciswa kwe-HDMI ® 2.1 kukuhlaziya okutsha kweenkcukacha ze-HDMI kwaye kuxhasa uluhlu lwezisombululo eziphezulu zevidiyo kunye nokuhlaziya amaxabiso kubandakanya i-8K60 kunye ne-4K120, kunye nezisombululo ukuya kuthi ga kwi-10K. Iifomathi ze-HDR ezinamandla nazo ziyaxhaswa, kwaye amandla e-bandwidth andisiwe ...
Sisebenza njani isinxibelelanisi sohlobo C lwe-C kwimowudi ye-HDMI Alt?
Imowudi ye-HDMI Alt yesidibanisi sohlobo lwe-C-CTM ivumela izixhobo ezinikwe amandla ze-HDMI ukuba zisebenzise ikhonkco yohlobo C lwe-C ukuqhagamshela ngokuthe ngqo kwimiboniso ye-HDMI, kwaye ihambise imiqondiso ye-HDMI kunye neempawu ngentambo elula ngaphandle kwesidingo somgaqo kunye nesidibanisi. iadaptha okanye iidongles. Oku kwenza ukuba t ...
Yintoni i-USB 3.2?
Ukucaciswa kwe-USB 3.2 Njengoko ubuchwepheshe buhamba phambili, iintlobo ezintsha zezixhobo, iifomathi zosasazo, kunye nokugcinwa okungabizi kakhulu kuyahlangana. Bafuna ubukhulu becala lomda wokuhamba ukuze basebenzise amava abasebenzisi abanomdla abalindeleyo. Ukongeza, izicelo zomsebenzisi zifuna i-hi ...
Uphawu lwetshaja ye-USB (ukuhanjiswa kwamandla kwe-USB)
I-USB iguqukile kunxibelelwano lwedatha olunakho ukubonelela ngombane olilinganiselweyo kumboneleli ophambili wamandla ngonxibelelwano lwedatha. Namhlanje izixhobo ezininzi ziyabiza okanye zifumana amandla kuzo kumazibuko e-USB aqulethwe kwiilaptops, iimoto, iinqwelomoya okanye iziseko zodonga. I-USB iye yaba sisiseko samandla esixhaphakileyo ...
1. Uhlobo lwe-C-C® ye-USB kunye neNkcukacha zoQhagamshelo ekufuneka uyazi
Uhlobo lwe-C-C® ye-USB kunye noQhakamshelwano oluchaziweyo Ngokuqhubeka kwempumelelo yomdibaniso we-USB, kukho isidingo sokutshintsha iteknoloji ye-USB ukuze isebenzise amaqonga amatsha eekhompyuter kunye nezixhobo njengoko zihamba ziye kwimo encinci, encinci kunye nokukhanya kweefom. Uninzi lwala maqonga amatsha nezixhobo zi ...
Yiba nobungcali kuba uzinikele, uyasikhetha, ukhetha amava ahlukeneyo enkonzo.Inkampani yethu sisisombululo esihlanganisiweyo seR & D, uyilo, imveliso kunye neenkonzo zentengiso.
Lwedilesi: Wanfeng Innovation Centre, 1048th 358 kwiPhondo Road, Shatou Area, Chang'an Towm, Dongguan City, Guangdong, China.
Ngaba i-HDMI ibhetele kune-VFA, ukuba kunjalo, yintoni ...
Sayina ungene kuthi Incwadana yeendaba ye-USN yoBomi Kwaye ufumane i-10% yevawutsha